Banyere Anyị - Jiangsu Jiasheng Petroleum Tech Co., Ltd.
Jiangsu Jiasheng Petroleum Tech Co., Ltd.emi odude ke Xuzhou, Jiangsu n'ógbè, na-adaba adaba njem na ụgbọ okporo ígwè, okporo ụzọ na ụgbọelu. Anyị ụlọ ọrụ bụ a pụrụ iche na emeputa tụnyere imewe, mmepụta na ire n'ime ihe organic dum.
Companylọ ọrụ anyị na-arụpụta ma na-ere akụkụ ụgbọ mmiri dị iche iche, akụkụ mmanụ, akụkụ ụgbọ mmiri na-agba mmiri, aluminom na igwe anaghị agba nchara ngwa ngwa, ụzọ abụọ na ụzọ atọ na treble-ụzọ, obere na nrụgide petrochemical valves, ụkpụrụ ọkọlọtọ gas na-agbake gas, ngwaahịa gas na-agbake ngwaahịa . A na-enye ngwaahịa anyị maka ụlọ ọrụ dịka ụlọ ọrụ mmanụ, ndị agha, ebu mmanụ, ụgbọ ala tank, ụgbọ mmiri na ọdụ mmanụ.
Companylọ ọrụ anyị na-enye ngwaahịa ndị a kwadebere nke ọma, usoro dị elu, ike ọrụ ike, anyị nwere ike ịmalite ịmepụta akụkụ ndị ọzọ pụrụ iche.
Ndị ọzọ na-azụ ahịa
Companylọ ọrụ anyị nwere ahụmịhe injinia ruo ọtụtụ afọ, anyị bụkwa ndị ọkachamara na ntinye nke ọdụ ikuku gas, tank mmanụ, tankị korota, ebe nchekwa mmanya, pipeline na gas gas na-ewu, otu ugboro na abụọ gas ọdụ mgbake mmepe, European ọkọlọtọ tank ụgbọala refit .
"Top àgwà, ezi uche ahịa & bukwanu mgbe-sales ọrụ" bụ anyị ụkpụrụ, "Ahịa 'afọ ojuju" bụ anyị ebighi ebi mgbaru ọsọ; anyị na ngwaahịa na-ọma nabatara bụghị naanị na anụ ụlọ ahịa kamakwa na ọtụtụ oversea ahịa gburugburu ụwa.
1). Factory kpọmkwem ahịa, ọzọ asọmpi, nwere ike inye a dịgasị iche iche nke Ebu, na-enye kenha ngwa.
2). Anyị onwe anyị factory, nditịm ịchịkwa ọ bụla nzọụkwụ nke mmepụta, mma akara mma na nnyefe oge
3). Teknụzụ ndị tozuru etozu, ogo dị elu, na obere ntụpọ n'usoro mmepụta.
Anyị nwere ọtụtụ afọ nke ahụmịhe nke injinia nke ndị ọkachamara, lekwasị anya na nyocha na mmepe, iji nye ndị ahịa niile mkpa ha.
Jighi ike akara maka ọ bụla nzọụkwụ nke mmepụta, mma ịchịkwa àgwà na nnyefe oge.
Free maka ẹdude Samples bases na ya bara uru, na nlele oge bụ otu wokable ụbọchị. Ndị ahịa na-akwụ ụgwọ ego awara awara. A ga-akwụghachi ego nkwụghachi ụgwọ mgbe ịzụrụ ihe mbụ.